10 सामग्री प्रवृत्ति विज्ञापनदाता बेवास्ता गर्न लगाउन सक्दैन Martech Zone
१० सामग्री प्रवृत्ति विज्ञापनदाता उपेक्षा गर्न सक्दैन
मंगलवार, अगस्त 9, 2016 बिहीबार, अगस्ट 11, 2016 माइकल कोर्सुनस्की
At एमजीआईडी, हामी हजारौं विज्ञापनहरू देख्छौं र प्रत्येक महिना लाखौं बढी तिनीहरूको सेवा गर्छौं। हामी प्रत्येक विज्ञापनको प्रदर्शन ट्र्याक गर्छौं जुन हामी विज्ञापन गर्छौं र विज्ञापनकर्ताहरू र प्रकाशकहरूसँग सन्देश अनुकूलित गर्न काम गर्दछौं। हो, हामीसंग रहस्यहरू छन् जुन हामी केवल ग्राहकहरूसँग साझा गर्दछौं। तर, त्यहाँ ठूला तस्बिर प्रवृत्तिहरू छन् जुन हामी सबैलाई चासो राख्ने मानिसहरूसँग साझेदारी गर्न चाहन्छौं नेटिभ प्रदर्शन विज्ञापन, आशा छ कि सम्पूर्ण उद्योग लाई फाइदा।
यहाँ १० मूल प्रवृत्तिहरू छन् जुन देशी विज्ञापनलाई अहिले नै परिभाषित गर्दैछ:
दृश्य कथा - उत्पादन बेच्नको लागि तपाईंले व्यक्तिलाई सफलताको कथा दिनु पर्दछ। तिनीहरूले जेन वा जेरेमीको अनुभवलाई राम्रो प्रतिक्रिया गर्ने छन् - कोही जस्तो उनीहरू जस्तो - सेलिब्रिटी वा करोडपति भन्दा। व्यक्ति उही स्वास्थ्य र सौन्दर्य मुद्दाहरू, उही प्रविधि र घरको आवश्यकताहरू, उही यात्रा र सम्बन्धका सपनाहरूसँग कसैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छन्। कुनै पनि डेटि offers अफरहरू आमा वा बुबाको आँखामा देखिने सन्दर्भमा राम्रोसँग बेचिनेछ प्रेमको बच्चा भएको पछि। तिनीहरू अनलाइन भेटे। त्यो कथा भन्नुहोस्: उनीहरूको "बोरिंग रुटिनहरू एक अर्कालाई भेट्नु अघि" भन्ने फोटोहरू थप्नुहोस्। आजका एक उत्तम खेल फेला पार्न कत्ति गाह्रो छ भन्ने बारे केही शब्दहरू साझेदारी गर्नुहोस् - एक्लो साँझ, फ्रिज गरिएको खाना, विवाहित साथीहरू। कथामा यी चुनौतिहरूको उल्लेखले पाठकलाई उसलाई वा उनीलाई चिन्न र विज्ञापनसँग सम्बन्धित छ।
ब्लगरहरू र इंस्टाग्राम तारा - यो वर्ड-अफ-माउथ मार्केटिंग जस्तै छ, तर तपाईं पुग्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ लक्षित समूहको लागि व्यक्तिगत हो। तिनीहरूलाई तपाईंको प्रस्ताव प्रचार गर्न दिनुहोस्, तपाईंको विज्ञापन को नायक बन्नुहोस्, र तिनीहरूको अनुयायीहरूको सेना तपाईं संग हुनेछ। यो अधिक पारंपरिक सेलिब्रिटी एन्डरहरू प्रयोग गर्ने समान छैन। यी अनलाइन ताराहरूसँग उनीहरूका अनुयायीहरू तिनीहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्धमा विचार गर्छन्।
भिडियो शासन सर्वोच्च - दृश्य मिडियाको लागि मांग बढ्दो छ। यस प्रवृत्तिको कारण वायरलेस इन्टर्नेट जडानहरूको वृद्धि हो, अनलाईन प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको मोबाइल उपकरणहरूमा भिडियोहरू हेर्न र सुन्नको लागि अधिक अवसरहरू प्रदान गर्ने। भिडियो सामग्रीको ध्यान लिनको लागि सम्भव सबै तरीकाहरूको शीर्षमा आसमान छ। व्यक्तिहरूले यसलाई कुनै आवाज बिना हेर्न सक्छन् (उदाहरणका लागि लाइनमा वा थेरापिष्टमा बसिरहेको) वा कार ड्राइभ while गरेको बेलामा मात्र सुन्न। आज सबै जना केही दिन जान्न चाहन्छन् वा आफ्नो दिनको समयमा निष्क्रिय क्षणहरूमा मनोरन्जन गर्न चाहन्छन्। भिडियो सामग्री मोबाइल प्रविधि र डाटा सेवाहरूको विकासको रूपमा मोबाइल मोबाइलहरूको लागि मात्र प्रलोभनमा पर्नेछ।
इन्फोग्राफिक्स र एनिमेटेड GIFs शक्तिशाली उपकरणहरू हुन् - उनीहरूको प्रभावकारिताको कारण यो हो कि उनीहरूले ध्यान सृजनात्मक, आकर्षक र सजिलै बुझ्न सक्ने तरीकाले समात्छन्। तिनीहरू सिर्जना गर्न पनि धेरै सजिलो छ। त्यहाँ धेरै नि: शुल्क स्रोतहरू अनलाइन उपलब्ध छन् जुन तपाईंलाई देखाउन चाहानुभएको जानकारी फेला पार्न मद्दत गर्दछ। अन्तर्क्रियात्मक सामग्री प्रभावकारिताका लागि टाइमलाइन र समाचारफिडहरू पार गर्दछ।
अन्तर्वार्ता प्रसंग - तपाइँको सामग्री लेख्दा, तपाइँको दर्शकले पोष्ट गर्न सक्ने प्रश्नहरू प्रयोग गर्नुहोस्। व्यक्तिलाई विशेषज्ञबाट उत्तरहरू दिनुहोस्। कुन विशेषज्ञ? तपाईं निर्णय।
फन-केन्द्रित विज्ञापन - यो अर्को तातो चलन हो जुन केहि विज्ञापनदाताहरू हराइरहेका छन्। मानिसहरू गम्भीर भएकोमा थकित छन्। रमाईलो गर्नाले कुनै नोक्सान गर्दैन। सबै भन्दा गम्भीर सामग्रीको प्रतिनिधित्व गर्न भाइरल मेम्स र कमिकहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यसले मानिसहरूलाई आराम र मनोरन्जन गर्दछ। ह्युमर सधैं एक राम्रो कुरा क्लिक गरी अरूलाई साझा गर्न को लागी एक राम्रो कुरा हो।
"अब" बटनहरू - यो सबै समय बचत र सन्तोषजनक आवेगहरूको बारेमा हो, एक अचेतन चाल जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई व्यस्त राख्छ यदि उनीहरूले यो स्वीकार्दैनन् भने पनि। व्यक्तिहरू वास्तवमै "अहिले यसलाई खरीद गर्नुहोस्" र "अब हेर्नुहोस्" बटनहरू मनपराउँदछन् किनकि तिनीहरूले निर्बाध खरीदलाई आमन्त्रित गर्छन् र एउटा मनोरन्जनात्मक अनुभवको लागि वचन दिन्छन्।
क्विज - यस प्रकारको सामग्री २०१ 2016 को पहिलो आधा फेसबुकमा सब भन्दा सेयर गर्न योग्य भएको छ र कार्यमा उत्तम कल प्रदान गर्दछ। तपाईं आफ्नो वेबसाइट को लिंक को रूप मा केहि साधारण संग शुरू गर्न सक्नुहुनेछ, वा सायद निजीकृत लिंक उत्पादन सिफारिशहरुमा।
एपिसोडिक सामग्री - यो २०१ 2016 को "तातो टिकट" हो: सामग्री अध्यायमा टुक्रिएको छ र फरक विज्ञापन अभियान पनि प्रयोग गर्न सक्दछ। सेगमेन्टमा जानकारी वा मनोरन्जन पाउन प्रयोगकर्ताहरूलाई चासो राख्दछ र अधिकको लागि फिर्ता आउँछ किनभने तिनीहरू प्रत्येक अपडेट हेर्न र सुन्न उत्सुक छन्। होल्डिंग जानकारीले अधिक व्यस्त दर्शकहरूलाई समयको साथ ड्राइभ गर्न मद्दत गर्दछ किनकि प्रत्याशिताले प्रयोगकर्ताको वफादारी र अनुभवको तीव्रता बढाउँछ।
नेटिभ प्रदर्शन विज्ञापन - अधिक र अधिक व्यवसायहरूले अब सम्भावित ग्राहकहरू अनलाईनमा पुग्न स्वदेशी विज्ञापन प्रयोग गर्दैछन्। MGID एक अग्रणी नेटिभ विज्ञापन नेटवर्क हो जसले प्रकाशकहरू, विज्ञापनदाताहरू र उपभोक्ताहरूलाई अधिकतम परिणामहरू दिन्छ। हाम्रो प्रदर्शन-आधारित सर्तहरूले प्रकाशकहरूलाई गैर-अवरूद्ध गराउने प्रस्तुतीकरणमा प्रायोजित सन्देशहरूको मूल प्लेसमेन्टहरूको माध्यमबाट राजस्वको स्थिर स्ट्रिम सुनिश्चित गर्दछ।
मूल भ्रमणकर्ता अधिग्रहणको बारेमा अधिक जान्नुहोस्
हामी तपाईंलाई यी सामग्रीको प्रचलनहरूको साथ प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं। ती व्यक्तिहरू छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको उत्पादनलाई उत्तम प्रदर्शन गर्दछ, तिनीहरूलाई मिक्स गर्नुहोस् यदि यो मतलबमा पर्दछ भने, र तपाईंको संलग्नता स्तर विस्फोट भएको हेर्नको लागि तयारी गर्नुहोस्।
टैग: एनिमेटेड gifsब्लगर्ससामग्री विज्ञापनसामग्री विज्ञापन प्रवृत्तिएपिसोडिक सामग्रीमजा केन्द्रित विज्ञापनप्रभावकारीहरूइन्स्टाग्रामअन्तर्वार्ता प्रसंगमार्केटिंग इन्फोग्राफिक्समार्केटिंग भिडियोहरूमिलीग्रामनेटिभ विज्ञापननेटिभ विज्ञापन बजारनेटिभ प्रदर्शन विज्ञापनअब बटनहरूquizzesदृश्य कथा कथन
व्यवसायिक र फार्चुन 500०० कम्पनी अनुभवको विविध मिश्रणको साथ, माइकल कोर्सुनस्कीसँग मार्केटिंग एनालिटिक्स, व्यवहार लक्ष्यीकरण, र प्रविधि र दर्शक व्यवस्थापन कौशलको अनुपम संयोजन छ, जसले उसलाई ड्राइभ मद्दत गर्न सक्षम गर्दछ। MGID Inc. को अमेरिकामा विकास दर एमजीआईडी ​​हुनु अघि कोरसन्स्कीले AUDIENCEX मा एक विज्ञापन प्रविधि र मार्केटि company कम्पनीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद ओगटेका थिए जसले ब्रान्ड र एजेन्सी साझेदारहरूको अन्त्य देखि अन्त डिजिटल समाधान प्रदान गर्‍यो। कम्पनीले प्रदर्शन-संचालित विज्ञापनदाताहरूका लागि बुद्धिमान रणनीति र गतिशील नवीनता समाधानहरू प्रदान गर्‍यो। विगत दुई दशकहरूमा कोरसन्स्कीले वरिष्ठ नेतृत्व र साइबरडेफेन्डर, लिगेसी इन्टरएक्टिव, बिड्ज, मोड्निक र अन्यमा रणनीतिक पद पनि ओगटेका थिए।
के तपाईको मार्केटिंग संचारमा इमोजिस कूल छ? ?
कसरी व्यवसायहरू पोकीमोन गोको साथ ग्राहकहरू प्राप्त गर्दैछन्